Kura Ahonim Pa Mu | Onyankopɔn Dɔ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Brazilian Sign Language Catalan Cebuano Chavacano Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Ecuadorian Sign Language English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Japanese Sign Language Jula Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwanyama Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nzema Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Venda Venezuelan Sign Language Vezo Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Wobɛyɛ Dɛn Akura Ahonim Pa Mu?
1, 2. Dɛn nti na sɛ obi nam anadwo a ehia sɛ okura kanea, na yebetumi de atoto ahonim ho sɛn?
FA NO sɛ obi nam anadwo. Dɛn na ehia sɛ ɔfa na wanhwe ase anaa asɛm bɔne bi anto no? Ohia kanea a ɔde bɛhwɛ kwan mu.
2 Sɛ wunni kanea a wode bɛhwɛ kwan mu a, wubetumi ahwe ase, na asɛm bɔne nso betumi ato wo. Kanea betumi ama woahu kwan mu na abɔ wo ho ban. Ɔkwan bi so no, yebetumi de atoto akyɛde kɛse bi a Yehowa de ama yɛn ho. Ɛno ne yɛn ahonim. (Yakobo 1:17) Sɛ yenni ahonim a, anka biribiara nni hɔ a ɛbɛkyerɛ yɛn kwan wɔ abrabɔ mu. Enti yɛbɛhwɛ dekode a wɔfrɛ no ahonim ne dwuma a edi. Afei yebesua nea edidi so yi: (1) Ɔkwan a yɛbɛfa so atete yɛn ahonim, (2) nea enti a ɛsɛ sɛ yɛma afoforo ahonim hia yɛn, ne (3) nea enti a sɛ yekura ahonim pa mu a yebenya so mfaso.
DƐN NE AHONIM, NA DWUMA BƐN NA EDI?
3. Hela asɛmfua a wɔkyerɛ ase “ahonim” no kyerɛ sɛn ankasa, na dwuma bɛn na edi wɔ nnipa mu?
3 Nea Hela asɛmfua a wɔkyerɛ ase “ahonim” wɔ Bible mu no kyerɛ ankasa ne “nimdeɛ a ɛbata wo ho, anaa w’ankasa ho nimdeɛ.” Asase so abɔde nyinaa mu no, yɛn nkutoo na Onyankopɔn ama yɛn tumi a yɛde hu nea ɛwɔ yɛn mu. Ɔkwan bi so no, yebetumi agyina baabi ahwehwɛ yɛn mu ahwɛ sɛ nea yɛreyɛ no teɛ anaa. Yɛn ahonim di adanse wɔ yɛn mu. Etumi hwehwɛ yɛn nneyɛe, yɛn suban, ne nea yɛn ani gye ho mu. Ebetumi aboa yɛn ma yɛasi gyinae pa, na ebetumi abɔ yɛn kɔkɔ nso na yɛansi gyinae bɔne. Afei nso sɛ yɛyɛ ade pa a, yɛn ahonim tumi bu yɛn bem, na sɛ yɛanyɛ ade pa nso a, etumi bu yɛn fɔ na ɛteetee yɛn.
4, 5. (a) Yɛyɛ dɛn hu sɛ na Adam ne Hawa nyinaa wɔ ahonim, na bere a wobuu Onyankopɔn mmara so no, dɛn na ɛbae? (b) Ma nhwɛso fa kyerɛ sɛnea ahonim yɛɛ adwuma wɔ Onyankopɔn asomfo anokwafo bi mu.
4 Wɔde ahonim bɔɔ ɔbarima ne ɔbea a wodi kan no. Adam ne Hawa kyerɛe sɛ wɔn mu biara wɔ ahonim. Nea ɛma yehu saa ne sɛ, bere a wɔyɛɛ bɔne no, wɔn ani wui. (Genesis 3:7, 8) Ɛwom, wɔn ahonim haw wɔn, nanso awerɛhosɛm ne sɛ saa bere no na aka akyi. Wɔboapa buu Onyankopɔn mmara so. Wɔhyɛɛ da na wɔtew atua bɛyɛɛ Yehowa Nyankopɔn atamfo. Ná bɔne nni wɔn ho; ná wonim nea wɔreyɛ, enti na wɔrentumi nsan mma Onyankopɔn nkyɛn.
5 Nnipa bebree nte sɛ Adam ne Hawa. Bɔne wɔ wɔn ho deɛ, nanso wotie wɔn ahonim. Ɛno nti ɔnokwafo Hiob tumi kae sɛ: “Mikura me trenee mu denneennen, na merennyaa mu; me koma rensopa me, me nkwa nna bi ho.” * (Hiob 27:6) Hiob amfa n’ahonim anni agorɔ koraa. Otiee nea n’ahonim ka kyerɛɛ no no yiye, na ɔma ɛkyerɛɛ no kwan wɔ ne nneyɛe ne ne gyinaesi mu. Enti otumi de ahotoso kae sɛ n’ahonim ansopa no anaa anhaw no, na anhyɛ no aniwu ammu no fɔ. Sɛ yɛde Hiob de no toto nea ɛtoo Dawid no ho a, yehu nsonsonoe bi. Ná Saul yɛ ɔhene a Yehowa asra no. Bere bi Dawid yɛɛ biribi de buu Saul animtiaa, na “ɛno akyi no, Dawid koma bɔɔ no.” (1 Samuel 24:5) Bere a Dawid ahonim buu no fɔ no, ɛboaa no yiye, na ɛno akyi no, wanyɛ biribi a ɛte saa bio.
6. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ nnipa nyinaa wɔ ahonim?
6 Nnipa a wɔsom Yehowa nkutoo na wɔwɔ ahonim anaa? Hwɛ asɛm a Onyankopɔn maa ɔsomafo Paulo kyerɛwee yi: “Bere biara a amanaman mufo a wonni mmara no fi awosu mu yɛ mmara no mu nneɛma no, ɛwom sɛ saa nnipa yi nni mmara de, nanso nea wɔyɛ no yɛ mmara ma wɔn ankasa. Wɔn ankasa na wɔkyerɛ sɛ wɔakyerɛw mmara no nnyinasode agu wɔn komam, bere a wɔn ahonim ka wɔn ho di adanse no, na wobu wɔn ho fɔ anaa woyi wɔn ho ano wɔ wɔn ankasa nsusuwii mu.” (Romafo 2:14, 15) Wɔn a wonnim Yehowa mmara ho hwee mpo no, ɛtɔ mmere bi a, wɔn ahonim ka wɔn ma wɔde Onyankopɔn nnyinasosɛm bɔ wɔn bra.
7. Dɛn nti na ɛtɔ mmere bi a, yɛn ahonim betumi adi yɛn huammɔ?
7 Nanso ɛtɔ da bi a yɛn ahonim betumi adi yɛn huammɔ. Dɛn ntia? Wo deɛ, kae kanea ho mfatoho no. Sɛ kanea no mu yɛ fĩ a, ɛremma yenhu kwan mu yiye. Saa ara na yɛn ahonim te. Sɛ yɛansua Onyankopɔn Asɛm a, yɛrentumi nhu papa ne bɔne mu nsonsonoe. Saa ara na sɛ yɛanhwɛ yiye a, pɛsɛmenkominya betumi aba yɛn koma mu, na ɛremma yɛn ahonim nkyerɛ yɛn kwan yiye. Ampa ara, sɛ yɛn ahonim betumi ayɛ adwuma yiye a, yehia Yehowa honhom kronkron akwankyerɛ. Paulo kyerɛwee sɛ: “M’ahonim di me adanse honhom kronkron mu.” (Romafo 9:1) Nanso yɛbɛyɛ dɛn ama yɛn ahonim ayɛ adwuma sɛnea Yehowa honhom kronkron kyerɛ? Gye sɛ yɛtete no.
NEA YƐBƐYƐ AMA YƐN AHONIM AYƐ ADWUMA YIYE
8. (a) Dɛn na yɛn koma betumi ayɛ yɛn ahonim, na sɛ yɛresi gyinae a, dɛn na ɛsɛ sɛ ehia yɛn paa? (b) Dɛn nti na sɛ Kristoni ahonim nhaw no a, ɛnkyerɛ sɛ ɔnyɛɛ bɔne? (Hwɛ ase hɔ asɛm no.)
8 Wobɛyɛ dɛn de w’ahonim asi gyinae? Ebinom di wɔn koma akyi anaa wɔhwɛ sɛnea wɔte nka wɔ wɔn mu na wɔasi gyinae. Ɛno akyi no wɔka sɛ, “M’ahonim mmu me fɔ.” Sɛ biribi ba yɛn koma mu sɛ yɛnyɛ a, etumi hyɛ yɛn so paa. Etumi daadaa yɛn ahonim mpo. Bible se: “Koma yɛ okontomponi sen ade nyinaa na ne ho yɛ ahometew. Hena na obetumi ahu mu?” (Yeremia 17:9) Enti ɛnyɛ nea yɛn koma pɛ na ɛsɛ sɛ yɛde si gyinae. Mmom no nea ɛsɛ sɛ ehia yɛn paa ne nea Yehowa Nyankopɔn pɛ. *
9. Dɛn ne Onyankopɔn suro, na sɛ yenya saa osuro no a, ɛbɛka yɛn ahonim dɛn?
9 Sɛ yɛde yɛn ahonim a yɛatete no si gyinae a, ɛbɛkyerɛ sɛ yesuro Nyankopɔn, na ɛnyɛ nea yɛpɛ na yɛyɛ. Ma yɛnhwɛ eyi ho nhwɛso. Ná amrado nokwafo Nehemia wɔ hokwan sɛ ogyigye sika ne tow fi nnipa a wɔtete Yerusalem no hɔ, nanso wanyɛ saa. Dɛn ntia? Efisɛ na ɔmpɛ koraa sɛ ɔbɛyɛ biribi ama Onyankopɔn nkurɔfo ho akyere wɔn na Yehowa bo afuw no. Ɔkae sɛ: “Onyankopɔn a misuro no nti, mamfa saa kwan no so.” (Nehemia 5:15) Ehia sɛ yenya Onyankopɔn suro, kyerɛ sɛ, osuro a efi koma mu a ɛremma yɛnyɛ nea yɛn soro Agya no mpɛ. Osuro a ɛte saa no bɛkanyan yɛn ma yɛahwehwɛ akwankyerɛ wɔ Onyankopɔn Asɛm mu de asisi gyinae.
10, 11. Bible nnyinasosɛm bɛn na ɛfa asanom ho, na yɛbɛyɛ dɛn anya Onyankopɔn akwankyerɛ de adi ho dwuma?
10 Ma yɛmfa nsã nyɛ nhwɛso. Sɛ yɛkɔ apontow ase a, eyi yɛ biribi a ɛsɛ sɛ yɛn mu pii si ho gyinae—yɛbɛnom nsã anaa yɛrennom? Nea edi kan no, ɛsɛ sɛ yenya asɛm no ho nimdeɛ. Bible nnyinasosɛm bɛn na ɛfa asɛm yi ho? Entia Bible mmara sɛ yɛbɛnom nsã kakra. Ɛkamfo Yehowa mpo sɛ ɔbɔɔ nsã. (Dwom 104:14, 15) Nanso Bible kasa tia asabow ne anigye ntraso wɔ apontow ase. (Luka 21:34; Romafo 13:13) Bio nso, ɛka sɛ asabow yɛ bɔne a emu yɛ duru te sɛ aguamammɔ anaa nna mu ɔbrasɛe. *—1 Korintofo 6:9, 10.
11 Ɛsɛ sɛ Kristoni de nnyinasosɛm yi tete n’ahonim ma ɛyɛ nam. Enti sɛ yɛne yɛn nnamfo rekohyia mu na sɛ wɔde nsã bɛba hɔ a, yebetumi abisa yɛn ho sɛ: ‘Dɛn nti na yɛrekohyia? Apontow no betumi agye yɛn nsam ama adan anigye ntraso anaa? Me nso, ɛyɛ a meyɛ m’ade sɛn wɔ nsã ho? M’ani gye nsã ho paa ma enti sɛ mannom bi a mintumi ntena? Menom de kata nneɛma so anaa menom de yɛ nneɛma a anka merentumi nyɛ? Mitumi hyɛ me ho so wɔ dodow a menom ho anaa?’ Sɛ yɛredwinnwen Bible nnyinasosɛm ho na ɛma yebisabisa yɛn ho nsɛm a, ɛsɛ sɛ yɛbɔ Yehowa mpae de hwehwɛ n’akwankyerɛ. (Kenkan Dwom 139:23, 24.) Sɛ yɛyɛ saa a, na yɛreka akyerɛ Yehowa sɛ ɔmma ne honhom kronkron nkyerɛ yɛn kwan. Yɛyɛ saa nso a, na yɛde Onyankopɔn nnyinasosɛm retete yɛn ahonim. Nanso ade foforo wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yedwen ho wɔ yɛn gyinaesi mu.
ADƐN NTI NA ƐSƐ SƐ YEDWEN AFOFORO AHONIM HO?
Sɛ wode Bible tete w’ahonim a, ɛbɛboa wo ma woahu sɛ ehia sɛ wonom nsã anaa enhia
12, 13. Adɛn nti na ɛsono Kristoni biara ahonim, na dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ wɔ nsonsonoe no ho?
12 Nneɛma pii mu no, ɛbɛyɛ wo nwonwa sɛ wubehu sɛ ɛsono nea Kristoni biara ahonim bɛma no kwan ma wayɛ. Adeyɛ anaa amammerɛ bi wɔ hɔ a, obi bebu no sɛ asɛm wɔ ho, nanso ɔfoforo deɛ, n’ani begye ho na ɔrenhu nea enti a ɛsɛ sɛ obi kasa tia. Ɛfa asanom ho no, ebinom ani begye ho sɛ anwummere bi wɔne wɔn nnamfo behyia mu na wɔanom nsã de adwudwo wɔn ho, nanso ebinom mpɛ saa. Dɛn nti na ɛsono nea obiara bɛyɛ wɔ nneɛma a ɛtete saa mu, na ɛsɛ sɛ eyi ma yesi gyinae bɛn?
13 Nneɛma bi nti, ɛsono sɛnea obiara te. Wɔantete yɛn nyinaa wɔ faako. Ebinom fam no, wɔda so kae sɛnea wɔbrɛe ansa na wɔretumi agyae nneɛma bi; ɛno mpo, ɛtɔ mmere bi a na agye agu. (1 Ahene 8:38, 39) Sɛ nsã na na ɛhaw saa nipa no a, ɛbɛma wahwɛ ne ho yiye paa wɔ ho. Sɛ onipa a ɔte saa ba wo fie a, ebia n’ahonim nti, sɛ woma no nsã a, ɔrennom. Ɛba saa a, ɛbɛhaw wo anaa? Wobɛhyɛ no? Ɛnsɛ sɛ woyɛ saa. Ebia ɔrempɛ sɛ ɔbɛka nea enti a ɔrennom. Nanso sɛ wunim nea enti a ɔreyɛ saa oo, sɛ wunnim oo, onuadɔ nti, ɛnsɛ sɛ wohyɛ no.
14, 15. Tete Kristofo asafo no mu no, asɛm bɛn mu na na ɛsono obiara ahonim, na dɛn na Paulo kae wɔ ho?
14 Ɔsomafo Paulo hui wɔ tete Kristofo asafo no mu sɛ ɛsono wɔn mu biara ahonim wɔ nsɛm pii mu. Saa bere no na ɛhaw Kristofo binom ahonim sɛ wobedi nnuan a wɔde abɔ afɔre ama abosom. (1 Korintofo 10:25) Sɛ wɔkɔtɔn nnuan a ɛte saa wɔ gua so akyiri yi a, na Paulo ahonim nhaw no sɛ obedi. Paulo ani so no, na abosom nyɛ hwee; ɔkyerɛe sɛ nnuan a Yehowa na wabɔ no rentumi mmɛyɛ abosom dea da, efisɛ ɛyɛ Yehowa ankasa dea. Nanso Paulo hui sɛ ebinom ne n’adwene nhyia wɔ asɛm yi ho. Ɛbɛyɛ sɛ ebinom som abosom kyɛe paa ansa na wɔrebɛyɛ Kristofo. Ná wobebu biribiara a bere bi na ɛbata abosonsom ho no sɛ ɛmfata. Dɛn na Paulo yɛe wɔ ho?
15 Paulo kae sɛ: “Nanso ɛsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ den no soa wɔn a wɔnyɛ den no mmerɛwyɛ, na ɛnsɛ sɛ yɛsɔ yɛn ankasa ani. Na Kristo mpo ansɔ n’ankasa ani.” (Romafo 15:1, 3) Paulo kyerɛɛ mu sɛ sɛnea Kristo yɛe no, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn nuanom asɛm hia yɛn kyɛn yɛn ankasa de. Bere a Paulo reka asɛnkoro no ara wɔ baabi foforo no, ɔkae sɛ, sɛ nam a obedi no bɛto Kristo nguan a ɔde ne nkwa too hɔ maa wɔn no bi hintidua a, ɛnde ɔrenni koraa.—Kenkan 1 Korintofo 8:13; 10:23, 24, 31-33.
16. Wɔn a wɔn ahonim mma wɔn kwan wɔ nneɛma bi mu no, dɛn nti na ɛnsɛ sɛ wobu afoforo a ɛsono wɔn ahonim no atɛn?
16 Wɔn nso a wɔn ahonim mma wɔn kwan wɔ nneɛma bi mu no, ɛnsɛ sɛ wɔde wɔn ahonim bu afoforo atɛn. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔma obiara de n’ahonim yɛ adwuma. (Kenkan Romafo 14:10.) Wɔde ahonim ama yɛn sɛ emmu yɛn ankasa atɛn, na ɛnyɛ sɛ yɛmfa mmu afoforo atɛn. Kae Yesu asɛm yi: “Munnyae atɛn a mubu nkurɔfo no na wɔammu mo atɛn.” (Mateo 7:1) Ɛsɛ sɛ asafo no mufo nyinaa hwɛ yiye sɛ wɔremfa wɔn ahonim nhyehyɛ mmara mma afoforo. Mmom no, yɛmmɔ mmɔden mma ɔdɔ ne baakoyɛ ntena yɛn ntam, na yɛnyɛ nneɛma a ɛbɛhyɛ afoforo den, ɛnyɛ nea ebebu wɔn aba mu.—Romafo 14:19.
MFASO A ƐWƆ AHONIM PA SO
Ahonim pa betumi akyerɛ yɛn kwan wɔ abrabɔ mu, na ama yɛanya anigye ne asomdwoe
17. Nnipa pii ahonim te sɛn nnɛ?
17 Ɔsomafo Petro kyerɛwee sɛ: “Munkura ahonim pa mu.” (1 Petro 3:16) Ahonim a ɛho tew wɔ Yehowa Nyankopɔn ani so no yɛ akyɛde kɛse. Nnipa pii nni saa ahonim no bi nnɛ. Paulo kaa ebinom ho asɛm sɛ “wɔn ahonim [ayɛ] sɛ ahyehyekuru twã.” (1 Timoteo 4:2) Sɛ wɔde dade hye obi a, egyaw etwã bi wɔ ne ho na honam no wu. Ɔkwan bi so no, nnipa pii ahonim nyɛ adwuma bio. Ɛte sɛ etwã a ɛhɔ nam awu, enti ɛmmɔ wɔn kɔkɔ anaa ɛnkasa ntia biribi a wɔrebɛyɛ, na ɛnhyɛ wɔn aniwu anaa emmu wɔn fɔ bio wɔ bɔne ho. Nnipa bebree fam no, ɛnhaw wɔn koraa sɛ wɔde wɔn ahonim bɛto nkyɛn.
18, 19. (a) Sɛ yɛn ahonim bu yɛn fɔ ma yɛn ani wu a, etumi boa yɛn wɔ dɛn mu? (b) Sɛ yɛayɛ bɔne bi agyae, na ne nyinaa akyi yɛn ahonim kɔ so haw yɛn a, dɛn na yebetumi ayɛ?
18 Nokwasɛm ni, sɛ yɛte afobu nka a, na ɛyɛ ahonim na ɛreka akyerɛ yɛn sɛ yɛayɛ bɔne. Sɛ ɛka yɛn ma yɛsakra na sɛ yɛn bɔne sõ sɛ dɛn ara mpo a, wɔde befiri yɛn. Ɛho nhwɛso ne sɛ, Ɔhene Dawid yɛɛ bɔne a emu yɛ duru nanso esiane sɛ onuu ne ho nti, wɔde firii no. Bɔne a ɔyɛe no yɛɛ no tan na ɔbɔɔ ne tirim sɛ obedi Yehowa mmara so, na efi saa bere no, n’ankasa hui sɛ Yehowa ‘ye na ɔwɔ ɔpɛ sɛ ɔde bɔne befiri.’ (Dwom 51:1-19; 86:5) Nanso sɛ yɛyɛ bɔne na yenu yɛn ho ma wɔde yɛn bɔne kyɛ yɛn, na sɛ ne nyinaa akyi yɛn ahonim bu yɛn fɔ ma yɛn ani wu paa a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
19 Ɛtɔ mmere bi a obi ahonim betumi abu no fɔ kɛse. Bɔne bi a wayɛ agyae dedaadaw betumi akɔ so ahaw no kwa. Sɛ ɛba saa a, ɛnsɛ sɛ yɛma yɛn koma bu yɛn fɔ, na mmom ɛsɛ sɛ yenya awerɛhyem sɛ Yehowa sõ sen atenka biara a nnipa betumi anya. Ɛyɛ a yɛhyɛ afoforo nkuran sɛ wonnya awerɛhyem sɛ Onyankopɔn dɔ wɔn na ɔde bɔne firi. Ɛsɛ sɛ yɛn nso yegye saa asɛm no tom. (Kenkan 1 Yohane 3:19, 20.) Sɛ obi ahonim ho tew nso a, ɛma no asomdwoe, akomatɔyam ne anigye kɛse a nnipa pii nni bi wɔ wiase no. Nnipa bebree a bere bi na wɔyɛ bɔne a emu yɛ duru no anya ahotɔ kɛse saa ara, na wɔde ahonim pa resom Yehowa Nyankopɔn nnɛ.—1 Korintofo 6:11.
20, 21. (a) Wɔayɛ nhoma yi sɛ ɛmmoa wo wɔ dɛn mu? (b) Ahofadi bɛn na Kristofo wɔ, nanso dwuma bɛn na ɛsɛ sɛ wɔde di?
20 Ɔhaw ahyɛ Satan wiase no nna a edi akyiri yi mã, na yɛayɛ nhoma yi sɛ ɛmmoa wo mma w’ani nnye na woatumi akura ahonim pa mu wɔ nna a aka yi mu. Nanso Bible mmara ne nnyinasosɛm a wode bedi tebea biara ho dwuma da biara no, ɛnyɛ ne nyinaa na ɛwɔ nhoma yi mu. Bio nso, nsɛm bi wɔ hɔ a wogyae ma ahonim, enti nhwɛ kwan sɛ wubehu biribiara ho mmara wɔ nhoma yi mu. Yɛayɛ nhoma yi sɛ fa sua Onyankopɔn Asɛm na hu sɛnea wode bɛyɛ adwuma daa wɔ w’asetena mu na atete w’ahonim ma ayɛ nnam. “Kristo mmara” nte sɛ Mose Mmara no; “Kristo mmara” no hyɛ wɔn a wodi so no nkuran sɛ wɔmfa wɔn ahonim ne nnyinasosɛm mmɔ wɔn bra, na mmom ɛnyɛ mmara. (Galatifo 6:2) Enti Yehowa ma Kristofo ahofadi pii. Nanso, n’Asɛm kae yɛn sɛ ɛnsɛ sɛ yɛde ahofadi a yɛwɔ no yɛ “bɔnepɛ so nkataso.” (1 Petro 2:16) Mmom no, saa ahofadi no ma yɛn hokwan kɛse ma yɛkyerɛ sɛ yɛdɔ Yehowa.
21 Sɛ wobɔ mpae hwehwɛ ɔkwampa a wobɛfa so de Bible nnyinasosɛm abɔ wo bra, na sɛ wode yɛ adwuma a, ɛbɛma woakɔ so ayɛ adepa a wufii ase bere a wubehuu Yehowa foforo no. Wobɛtete ‘w’adwene bere a wode yɛ adwuma’ no. (Hebrifo 5:14) Sɛ wode Bible tete w’ahonim a, wubenya so mfaso wɔ w’asetena mu bere nyinaa. Sɛnea kanea betumi ama woahu kwan mu yiye no, saa ara na w’ahonim bɛboa wo ama woasisi gyinae a ɛbɛma wo soro Agya no ani agye. Eyi yɛ ɔkwampa a wonam so de wo ho besie Onyankopɔn dɔ mu.
^ nky. 5 Biribiara kyerɛ sɛ ahonim ho asɛm na ɔreka wɔ ha. Sɛ wɔka “koma” ho asɛm a, mpɛn pii no ɛkyerɛ sɛnea obi te wɔ ne mu. Sɛnea ɔkaa ho asɛm wɔ ha no, ɛma yehu pefee sɛ ɛfa ahonim ho. Hela asɛmfua a wɔkyerɛ ase “ahonim” no pue bɛyɛ mpɛn 30 wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu.
^ nky. 8 Bible ma yehu sɛ, sɛ yɛn ahonim nhaw yɛn a, ɛnkyerɛ sɛ yɛnyɛɛ bɔne. Ɛho nhwɛso bi ni. Paulo kae sɛ: “Minnim asɛm biara a ɛwɔ me ho. Nanso eyi mma minni bem, na nea odi m’asɛm ne Yehowa.” (1 Korintofo 4:4) Wɔn a wɔtaa Kristofo sɛnea bere bi Paulo yɛe no mpo, ebetumi aba sɛ wɔn ahonim remmu wɔn fɔ efisɛ wɔn adwene bɛyɛ wɔn sɛ Onyankopɔn pene so. Ɛho hia sɛ yɛyɛ nea ɛremma yɛn ahonim mmu yɛn fɔ na yɛma yɛn ahonim ho tew wɔ Onyankopɔn anim nso.—Asomafo Nnwuma 23:1; 2 Timoteo 1:3.
^ nky. 10 Yɛnhyɛ no nsow sɛ nnuruyɛfo pii ka sɛ asadweam deɛ, yɛrentumi nka nkyerɛ wɔn sɛ wɔnnom nsã kakra. Wɔn fam no, “kakra” mpo nye mma wɔn; ɛsɛ sɛ wogyae nom koraa.
Esiane sɛ yenim sɛ Yehowa rehwɛ nea yɛreyɛ bere nyinaa nti, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛn ahonim ka yɛn ma yɛyɛ?—Hebrifo 4:13.
Ɔkwan bɛn so na Yosef ahonim boaa no ma odii sɔhwɛ so?—Genesis 39:1, 2, 7-12.
Dɛn nti na ahonim pa ho hia na yɛatumi akɔ Yehowa anim?—Hebrifo 10:22.
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yedwen wɔn a wɔnyɛ gyidifo ahonim ho?—2 Korintofo 4:1, 2.
Yɛbɛyɛ dɛn asi gyinae ma ɛne Nyankopɔn apɛde ahyia? Sɛ yesi gyinae a, dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛayɛ nea yɛaka no?